“Inaad isoo Booqato ayaan Rabaa.. Aniga Kuma soo Booqan karo!”- Sheeko (Qaybtii 3aad)
“Hadaba haddii ay sidaas tahey waxaan kuu direyna America oo walaalka ayaa lagaa daba geynaya” Erayadan ayuu ku cel-celinayey isagoo horey ula liitey walaalkey iga weyn, Abdurahman, mudo sanad ah lagu daaweynayey Mareynka Cancer kudhacay awgiis!…
Waxaan inbadan arki jirey aabahey oo telephoneka ku oynaya(ilmeynaya) marka uu lahadlayo Abdirahman. Muxuu inbadan Aakhir leylka uduceeyey , iyo salaadaha oo dhan. Aad iyo aad ayuu ugu murugeysana arintiisa, gaar ahaan marka uu arko ilmaha yaryar ee uu dhaley Abdirahman oo ay weydiyaan meesha uu aabahood jira ayagooo leh: “Awoowe! Meeyey aabaheen? Maxaa ku dhacey oo uu noola joogin sida ay ciyaalka kalaba aabayaashood ula joogan?”
Aabahey ayaan sidaas ufiirey, misna ilmada ayaa kasocota labada dhaban!… Waa gar oo wuxuu arka caruurtiisa oo hortiisa kudhimaneysa!
Walaalkey Khalid wuxuu kudhintey shil gaari 2sano kahor! Walaalkey Abdirahman wuxuu qarka usaaranyahey geeri (oo Mareyka dhakhtar kaga jira)! Aniga waa ikana oo iminka ayaan cagta saaray jidkaas oo lama oga meesha u kudhamandoona!
Aabahey ayaa isku dayey inuu lahadlo dhakhtarka oo uu weydiyo ‘inta uu la egyahey halisnimada cudurka ihaya’ , isagoo dhana qarinaya ilmada kasocota, hase ahaate caadifada aabonimo ayaa ka qaalib noqotey oo ilmadii ayaa sida biyaha ugu hoortey!
Doctor: Waxba hatiiranyoonin ya Aba Abdullahi! Arintu waa sahal insha’Allah! Niyada kheyr usheeg!
Aabahey: Waxaan rabna inaad nasiisid warqadaha Abdullahi oo dhan iyo wixii baaritan ah ee lasocda ee muhiim ah! Waxaan udireyna Mareykanka! Wuxuu kadaba tagaya walaalkiis oo horey loogu daaweynayey halkaas!
Dhakhtarkii wuu naga ogalaadey codsiganagii. Waraaqihii ayuu soo qaadey Aabahey… passportigii ayaa sideg-deg ah laygu soo saarey. Waxaana aadney aniga iyo walaalkey A/Asis dalka Mareykanka.
Galabnimo ayaan tagney dhakhtarka,wixii baaritaan ahaa ee humiim ahaa ayey qaadeen! Wax waliba waxay udhaceen si deg-deg ah.
Subixii ayey igaliyeen qolka qalninka! Maxaa naxdin ah! Waxaad aragtaba waa qalab, sikiin, midiyaal iyo maqasyaal! Waxaad umooda qolka ladhigo meydka marka ay nafta kabaxdo! Wajiyo fajacsan! Indho soo taagan oo aad umoodid inaay kulaqayaan!
Dhakhaatiirtii waxaay gacmaha kuduubteen wixii ay isaga celinlahaayeen dhiigayga! Isma xukuma, bal ayaga ayaa sida ay doonan iyo dhanka ay doonan ii ged-gediya! Waxay iga xanbaareen sariirtii laygu soo qaadey oo waxaay isaareen sariirtii qalniinka!
“BISMILLAHI…LAA ILAHA ILLALAHA” Ayaan afka kuboobey. Allah ayaan xasuustey. Waxaan sugaaaba waa qalninkii oo bilaabma!
Dadkii hareeraheyga taagna ayaan isha laraacey! Madaxeyga ayaan gacanta kusalaxey : Miskiin yaa ra’sii! Sidee buu noqon doona arinkada waxyar kadib, noolal mise geeri!
kalkaaliyashii ayaa diyaar garoobey! Waxaa umaleynaya dhakhtarkii howshan qabanlahaa inuusan wali soo galin! Si kadis ah, waxaa furmay albaabkii qolka qalninka! Waxaa kasoo galey nin aadan ka arkeynin indhaha mooyee! Sidabacsanan kujirta ayuu ii gacan qaadey! Kadibna qof buu utilmaamey inuu keeno IRBID (irbid weyn), kadibna wuxuu igaga dhuftey adinka!
Walaahi waxaad umooda daqiiqadii aduunyo iigu danbeysey! Waxaan galey xaalad qaybuuba (aan war uheyn waxa aduun kasocdo)
Wuxuu bilaabey qalninkii. Madaxa ayuu xiirey; kadibna meel buu ujirey si goobabin ah oo waxa uu soo saarey laftii, kadibna wuxuu soo saarey meeshii xanuuneysay (bararka), wuxuu wax yar kaweyna ukunta.
Ilaa iyo iminka howsha waxaay usocota sidii loogu tala galey! Misana,waxaa dhiig sii dayey xidada maskaxda. Kadibna qaybo maskaxda kamid ah ayaa howsha joojisay!
Dhakhtarkii ayaa isku dhexyaacey! Gacantii dhaq-dhaqaaqeeda iyo irbida awgeed ayaa waxaa igu dhacey SHALAL kala bar dhanka bidix.
Dhakhtarkii markii arintaas arkey ayuu si hal-haleyl ah ujoojiyey qalninkii wixii kaharey, kadibna laftii ayuu meesheedii kuceliyey! Wuxuu amrey in laygula cararo qolka naf dhowrka (Intensive Care Unit). Qalninka kadib waxaan miir la’aan kujirey 5saacadood.
Hadana waxaa howl gab kudhacey lugta bidix; waxaa layla cararey qolka qalninka. Qalbiga ayey fureen oo ay kurakibeen filtaraad dhiiga sifeeya. Hadana, waxaay igu celiyeen qolkii naf-dhowrka. 4saacadood ayaan sidaas kujirey ilaa kilida dhiig furmay!
Mar sedexaad ama afarad ayaa laygula cararey qolka qalninka; wadnaha ayaa lafurey oo la nadiifiyey. Markii dhiigii laxakameeyey ayey hadana igu soo celiyeen qolkii kale.
Dhakhtarkii ayaa kudhibaatoodey arinteydii, dhibaato marka uu xaliyaba midkale ayaa soo baxda! Xanuunyo kala gedisan, xaalado is rog-rog badan! Hadba filanwaa baa fag soo yirahda .Jaha-wareer ayey kunoqotey dhakhtarkii howsheyda!
Xaaladeydii ayaa markii danbe yara caga dhigatey 24 saac. Dhakhtarkii ayaa yara dareemey waxooga hormar ah iyo kasoo reyn. Waxaa sikadis ah cirka isku shareeyey dhiiga(blood pressure). Baaris deg-deg ah kadib,wuxuu ogaadey inuu suul-bood(infection) ka jiro meeshii laqaley. Waxaay dantu noqotey in lasoo saaro marlabaad inta aaney sumeyn maskaxda oo dhan.
Dhakhtarkii wuxuu uqayli dhaansadey tiimkii lashaqeynayey. Dhabarka intay igu qaadeen sidii meydkii ayey igu tureen sariirta qolka qalninka.
Waxooga miirka ayaa igu soo laabtey. Kadibna isha ayaan laraacey xagooda! Talo iyo tabar hasheegin. Ilaah baan talo saartey. Oohin ban is-heyn waayey. Waxaan kushalaayey haddii aan hooyadey iyo aabahey mar uun arki lahaa oo aan kadhuunkado gacmaha iyo walaahi lugaha, kahor intaanan aduunyada macsalaameyn!
Allah ayaan baryey, isaga ayaangargaar weydiistey: RABBI INNII MASANI ALDURU WA ANTA ARXAMU ARRAXIMIIN.
Gacmaha ayaan kor utaagey waxaana iri: YAA ARXAMU ARRAXIMIIN, HADDII AY WAXAAN TAHEY CIQAAB, WAXAAN KAA CODSANAYA DANBI DHAAF IYO NAXARIIS. HADDII AY TAHEY BALO IYO IMTIXAANA, IGU IRSAAQ SAMIR IYO DUL QAAD, AJIRKEYGANA II WEYNE. Kadibna oohintii ayaan lamiir daboolmay. Kal-kaaliyaashii ayaa igu qayliyey ayagoo igula hadlaya luuqad aanan fahmeynin. Haseyeeshe, waxaan ogaa inaay i aamusiinayan oo ay igu leeyihiin ‘isu tur dhaawac baad tahey!’
Waxaan bilaabey inaan is aamusiiya oo isa samirsiiyo! Waxaan xasuustey MIDKA MACAANKA GOOYA(GEERIDA)! Aniga meesha isdhigey ilaa ay aduunyada kuciyaartey maalmaheyga! Markasta oo la’ii naseexeeyaba,waxaan dhahaa: Mar dhow ayaan toobad keeneysa, waxaan toobad keeneyna majiraan!
Waxaa ihoday dhalanyaronimada, quruxda gaariga iyo dharka! Waan hilmaamey diyaar garowga Aakhiro! Xoogey waa tagey; birina waa Qabri iyo Xisaab! Tola’ay haddii aan kamid ahaan lahaa dadka salaatu laylka tukada ee ay hurdada udiidey xusuusta Naarta! Kuwa Soonka uqurxiyey Janada!
Waxa ihoryimid Xashriga iyo Xisaabta anigoo taagan! Tiiraanyada Qiyaamaha…Siraadka iyo miisanka…! Ayadoo laysu dhiibaya natiijooyinka xumaan iyo wanaag wixii lageystey! Qaar waxaay kor usii fuulayan jaran-jarada Janada, Qaarkalana waxay hoos ugu sii daadagayaan Naarta! Waxaas oo dhan iyo aniga, waxaa noo dhaxeeya in lagu dhawaaqo: Fulaan waa dhintey!
Waxaan kabaqaya inaan kudhawaaqo: Ilaahayow igu celi aduunyada si’aan usoo shaqeysta! Oo laygu jawaabo: Cumrigadii aduunyada waa dhamaadey!
Geeridi iyo dadkuk war usuma hayaan! Waxay kumashquulsanyihiin aruurinta aduunyada ayagoon calfana waa laga qaadaya, waxay dhisanayaan guryo w/weyn ayagoon kunasana waa laga qoor qabanaya. Cakuye aduunyadan.
Xaaladayda ayaan dib umilicsadey “Cumrigeyga waa koobanyahey, naftana waa macduum marka ay iga baxdo, jirkeygana waxaa cunaya aboorka (duud)!
Waxaa ii xiga waa Allahii ixisaabinaya waxyar iyo wax weyn intaba!
Dhaktarkii ayaa soo baxay, waxaan weydiiyey xanuunka iyo sababta keentey. Dheg jalaq ima siin… wuxuu amar kubixiyey inaan layla hadlin oo layga digtoonaado!
Qalkii iyo howshii waxay qaadatey saacad. Waxaa igu harersan waa qalabkii qalninka; kani waa kii neefta, kani waa kii… dhankastana waxaa iga taagan kal-kaaliyaal.
Xageen jooga? Waxaan xasuustey inaan America jooga, qolka qalninka. Gacanta ayaan kor uqaadey anigoo baaraya bal sida madaxa xaalkiisu yahey, mise waa jilecsanyahey! Meeyey laftii? Shaley waa kii buuxey ee maxaa kudhacey? Oohin ayaan afka qabsadey! Dhakhtarkii ayaan weydiiyey: Aawey madaxeygii intiisii kale?
Doctor: laftaada (lafaha madaxa laga saarey) anaga ayaa hayneyna, waan hagaajineyna. 6bilood kadib ayaad soo noqoneysa si’aan ugu celino meeshiisii!
Dhowr m/mood ayaan kujirey Intensive Care; kadibna waan kabaxay. Hal bil ayaan sii joogey America, kadibna waxaan kulaabtey Riyadh, caasimada Sacuudiga.
Waa ikana anigoo sugaya inaay dhamaato 6dii bilood si’aan usoo qaato madaxeygii intii kahartey!
Intaas kadib Abdullahi waa aamusay ‘isagoo isku celinayo oohin’
Aniga ahaan(ninka sheekada kasoo qorey Abdullahi” waan dhageysanayey anigoo layaaban sida ay ayaamuhu isu badalan!
Marka uu ahaa shaab xoog badan , waji quruxsan leh, ku raaxeysanayo hantida faraha badan, ka soo jeeda qoys la jecelyahey, ayuu maanta sidaas noqday! Waxay igu noqotey cibro qaadasho! Waxaa nasahan Allah wax xukuma ee aan laxukumin! Cakuye Aduunyo!
Al-Xamdullilahi, Allah wuu caafiyey oo wuu kabad baadey shalal,lugihiisa ayuuna kusocday!
Mudo ayuu kala go’ay xariirkanaga, hadana isaga ayaa ilas soo xariirey, wuxuuna ii sheegey inuu hada baxayo si’uu usoo qaato wixii kaharey madaxiisa. Hadana,markii uu soo laabteyna waan soo siyaartey,waxaana wajigiisa kamuuqatey farxad aan lasoo koobi karin! Allahba usoo celiyey caafimaadkiisii.
Wuxuu isiiyey cardka(casuumad) guurkiisa oo uu iigu yeeraya inaan kasoo qeyb galo!
Hada wuxuu kamidyahey dadka kheyrka hormuudka ka ah. Wuxuu wax siiyaa intaas oo masaakin oo uu usoo aruuriya Zakada. Wuxuu kale oo iskuduba rida Muxaadarooyinka iyo daabicada kutubta.
“Waxaa lagayaaba inaad dhibsataan arin, ayadoo Allah uu idinka yeelayo arintaas kheyr farabadan”
Allah ha nagu dhigo kuwa kafaa’ideyso caafimaadka aan lasoo koobikarin ee aan kujirno.
By DR. Muhammad Bin Abdurahman Al-Cureyfi.
Tarjama: Adam Abuzuhri Al-Hassani.